नेपालमा मुख्य समस्या भनेको राजनीति नै हो : सागर न्यौपाने - राष्ट्रखबर
अन्तरवार्ता नेपालमा मुख्य समस्या भनेको राजनीति नै हो : सागर न्यौपाने
नेपालमा अहिले दैनिक प्रयोग हुने सावुन तथा पाउडरहरु धेरै मात्रामा नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनिको उत्पादनहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालीहरुको मन जित्न सफल भएको छ । नेपालमा लुगाधुने सावुन र भाँडा माझ्ने पाउडर उत्पादन गर्दै आएको गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज प्रा.लीका जनरल म्यानेजर सागर न्यौपानेसंग मनोज थापाले गरेको कुराकानी :
गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज प्रा.लीले के–के उत्पादन गरिरहेको छ ।
गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज प्रा.ली २०५६ सालमा स्थपना भएको कम्पनि हो । अहिले जनकपुर, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा उत्पादन कारखाना रहेको छ । कम्पनीले डिटरजेण्ट पाउडरतर्फ भि सिरिज गोल्ड, भि सिरिज पपुलर, सुपर, विभिन्न लुगाधुने सावुन र भाँडा माझ्ने पाउडर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
बजारको अवस्था कस्तो छ ?
बजारको अवस्था एकदम राम्रो छ । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिको एकलौटी रहेको थियो तर अहिले नेपालको उत्पादनले बजार राम्रो लिएको छ । नेपाली सोप उद्योगले मागको ९५ प्रतिशत पुरा गर्न सकेको छ ।
प्रतिस्पर्धा कस्तो रहेको छ ?
हरेक वस्तुहरुमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिले नेपालका उत्पादन पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनिसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् । गुणस्तरमा उनीहरु भन्दा हामी कमजोर छैनौं ।
तपाईहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको प्रयोग किन गर्ने ?
नेपाली बजारमा स्वदेशी र गुणस्तरिय उत्पादनहरू सस्तो र शुलभ रूपमा उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराइरहेका छांैं । आइएसो प्राप्त कम्पनि हो । त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ ?
हामीले कच्चा पदार्थ युरोप, अष्ट्रेलिया, भारत, चीन लगायतका देशहरुबाट ल्याइहेका छौं ।
नेपालमा साबुनहरु उत्पादन गर्दा कतिको कठिनाइ छ ?
नेपालमा मुख्य समस्या भनेको राजनीति नै हो । त्यो स्थायीत्व हुनुपर्दछ र अर्को भनेको कामदार अभाव ठुलो समस्या छ । सबै विदेशमा जाने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्नका लागि भारतबाट कामदार ल्याउने अवस्था सृजना भएको छ । सरकार र नीजि क्षेत्र मिलेर नेपालका जनशक्ति विदेश पलाएन हुनबाट रोक्नु पर्दछ ।
तपाईहरुको राज्यसंग कस्तो अपेच्क्षा गर्नु भएको छ ?
नेतृत्वमा भिजन हुनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादन गर्ने वातावरण निर्माण हुुनुपर्दछ । पूर्वधार निर्माणमा राज्य प्रष्ट हुनुपर्दछ । जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सजिलो हुने थियो ।
तपाईहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न के गरिरहनु भएको छ ?
हामीले हाम्रो उत्पादनहरु देशका सबै भागमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं । गाउँमा हाम्रो उत्पादन लोकप्रिय भइसकेका छन् अब शहरमा केन्द्रीत हुन थालेका छौं । अन्तराष्ट्रिय उत्पादन सरहको गुणस्तरिय उत्पादन गरिरहेका छौं ।
ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
उहाँहरुको प्रतिक्रिया एकदम राम्रो रहेको छ । एक चोटी प्रयोग गरेका ग्राहकले नियमित नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।
आगामी योजना के बनाउनु भएको छ ?
आगामी दिनमा नेपालमा डिटरजेण्टमको क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन मात्र रहोस भन्ने नै हो ।
नेपाली उपभोक्तालाई प्रयोग गरेर मात्र त्यसको प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछु । नेपाली उत्पादन नराम्रो हुन्छ भन्नु पहिला त्यसको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
नेपाली बजारमा स्वदेशी र गुणस्तरिय उत्पादनहरू सस्तो र शुलभ रूपमा उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराइरहेका छ। आइएसो प्राप्त कम्पनि हो । त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
सौन्दर्य प्रतियोगिता पैसा कमाउन नभई सकारात्मक परिर्वतनका लागि आयोजना गरेको :शान्ता लामा